Kutheni le nto Amakhwenkwe amisela uHomelander njengoMphathi oMbi wobubi - Itv
Eyona Itv Uloyiso lwesidlo esibi
UAntony Starr njengoHomelander kuBafana, ebuyela kwisizini yesibini namhlanje.Ividiyo enkulu yeAmazon
Khawufane ucinge ukuba uSuperman wayengumntu ombi.
Leyo yenye yeendawo eziphambili ze- Uthotho lweAmazon Amakwenkwe . I-Homelander (u-Antony Starr), inkokheli yeqela eliphambili le sixhenxe, unamandla amakhulu kaSuperman kunye nombono wakhe wobushushu obukhulu. Uthetha njengoSuperman ngenyaniso, ubulungisa kunye nendlela yaseMelika. Kodwa ngokungafaniyo noSuperman, akakholelwa kuyo nayiphi na kwezo zinto. Uyi-psychopath ye-narcissistic elangazelela amandla kunye nodumo, iyangcungcuthekisa kwaye yoyikise abalingane bayo, kwaye ibulale ngokungakhathali nabani na omcaphukisayo nanini na enokuthi abaleke. Ukuphazanyiswa kukaStarr phakathi kokuzimela komkhuseli woluntu wobulungisa kunye nokubulala umntu ngemilebe yabucala yeyona nto iphambili kwisizini yokuqala yomboniso, kwaye yinxalenye enkulu yento abalandeli ababuyayo ngayo Okwesibini ukubetha iAmazon Prime Video namhlanje .
I-Homelander luphawu olukhulu, kodwa ayingafani kwaphela. Izikhohlakali ezimbi ezisekwe ngaphezulu okanye ngaphantsi ngokuthe ngqo kwi-Superman ibe sisiseko sohlobo lwe-superhero kumashumi eminyaka. Ngokuyinxenye oko kungenxa yokuba uSuperman okhohlakeleyo wenza umguvela olungileyo. Kodwa i-Supermen embi efana neHomelander ikwahlala iyimpendulo ethile ekugxekeni uhlobo lwe-superhero. I-Homelander kunye ne-super-ilk yakhe embi yindlela ye-superhero yokucinga ngayo. Ukufakwa kwe-superevil kwenza ukuba uhlobo lomelele ngakumbi.
I-Superman yoqobo yayine-bulletproof kwaye ikwazi ukutsiba izakhiwo ezide, kodwa akazange akwazi ukujikeleza izijikelezi-langa, ubuncinci ingekuko xa wenza idigri ngo-1938. Njengokuba umlinganiswa esiya esiba namandla ngakumbi kumashumi eminyaka, nangona kunjalo, kuye kwanzima bhala amabali apho wajongana nemiceli mngeni yokwenyani.
Ababhali baphendule kule ngxaki ngokudala ububi oBuphindaphindiweyo-abantu ababi abanamagunya kaSuperman. Omnye umzekelo wokuqala ukusukela ekupheleni kweminyaka yoo-1950 kwii-comics yayingu-Bizarro, isilwanyana esimhlophe esimhlophe esimhlophe saseFrankenstein esenziwe nge-ray engafezekanga, ekhathaza uSuperman ngengqondo yakhe yokudideka (Okubi kulungile! Ukuphumelela kuyalahleka!) Ade ekugqibeleni abhabhe kunye ezizigidi zezinye iikopi zeBizarro zokuphila kwiplanethi esisikwere.
Kwiskrini, uSuperman okhohlakeleyo ephindwe kabini wenza amatyala abo ngo-1980 Superman II , apho uSuperman alwa khona nezikrelemnqa ezintathu ezivela kwiplanethi yakhe yaseKrypton, bonke ababelana ngamagunya akhe-bebeka inqanaba leembaleki ezilayishwe ngeFX ngokukodwa ezilahlekileyo Superman ifilimu. Emva koko ungene USuperman iii , USuperman ngokwakhe ubonakalisiwe kukwahluka okungaqhelekanga kweKryptonite kwaye uya kuba mbi, horny kunye necruffy. Isidlo sangokuhlwa esibi-abasichebi.
U-Evil Superman oneenwele zobuso angenza ngaphezulu kokubonelela ngendawo elungileyo yokulwa, nangona. Rhoqo bazibukela, hayi nje uSuperman, kodwa iikhrayitheriya zikaSuperman.
Isayikholojisti yomntwana kunye nomgxeki odumileyo woohlekisi uFredric Wertham, umzekelo, Waxoxa Amagorha ngokubanzi, kwaye uSuperman ngokukodwa, ukhuthaze abantwana ukuba bazonwabise ngokubona abanye abantu bohlwaywa kaninzi-nye ngelixa wena uhlala ukhuselekile. UWertham wabiza le nto njengeSuperman complex.
Uluvo lukaSuperman njengenqanaba elikhubazekileyo lokukhula kwinqanaba lokufikisa likhuthaze uninzi lwabalinganiswa ababi beSuperman. I-Kid Marvelman, i-villain efana ne-Superman kwii-1980s ezihlekisayo Ummangaliso ngu-Alan Moore noGary Leach, ungumntu ohlukunyezwayo, oxhatshazwayo ngokwesondo ngaphambi kokuba afumane amandla e-cosmic kwaye awasebenzise ukubulala amakhulu amawaka abantu ngovuyo olukhulu. Imuvi ye2019 Ukuqaqamba inamandla afanayo. U-Superman wakhe ongendawo uneminyaka eli-12 ubudala, obulala ngomsindo wobutsha kunye ne-pique. USuperman utyholwa ngokuba ngumntu onobundlobongela kumandla okufikisa, kwaye ke abadali abaphambili beza ne-Supermen engendawo enobundlobongela.
IHomelander in Amakwenkwe iyayifanela le prototype yabantwana nayo: utyekele ekuziphatheni ngokwesini ngobisi lwebele. Kodwa ukwathetha nakwezinye izinto ezininzi ezibalaseleyo.
Umzekelo, uhlobo lwe-superhero ngaphambili kwaye namhlanje bekusoloko kuhlaselwa ngenxa ye-crass, shallow, corporate crap. UMartin Scorsese uphinde wakugxeka oku xa wathi iifilimu zeMarvel bezinjalo hayi umboniso bhanyabhanya kwaye ubathelekise nalo mgangatho wokuzonwabisa kubambiswano olunzulu, iipaki zemixholo.
Kwaye ke, kwi Amakwenkwe , I-Homelander yiyo, ngokuzicingela, iyimveliso ehlanganisiweyo kunye ne-shill ehlanganisiweyo. Iqela lesixhenxe le-superhero lihlawulwa kwaye liphethwe ligorha le-mega-corporation Vought International. I-Homelander ilwa (kunye nokubulala) ngamanye amaxesha. Kodwa uninzi lwexesha lakhe ulichithe ukuvela kwimiboniso bhanyabhanya, esenza ukubhengezwa kunye nokuxhasa iimveliso. Superman oMbi uyinxalenye yeScorse Superman, eqhutywa ngurhwebo oluvulekileyo kunye nokutya okubawayo.
Olunye ukugxekwa okuqhelekileyo kwamaqhawe kukuba baphendula. Wertham kunye nabanye ikhonjwe ngaphandle ukuba uSuperman angabonwa njenge-quasi-fascist-indoda emhlophe ene-genetics ephezulu elungile kuba yomelele kwaye inyanzelisa umthetho kunye nocwangco ngokubetha abantu abangenamandla. Kutshanje, abagxeki bachaze Iimpawu zama impiriyali yamabali amaninzi abalulekileyo; uMntu oMangalisayo weCinematic Cinema's Iron Man ngokoqobo a Imfazwe enkulu ithathe ithuba .
I-Homelander ikwangumphathi omkhulu wama-impiriyali kwaye uphendula kakhulu. Uninzi lwecebo lonyaka wokuqala libandakanya uVought uzama ukufumana amaqhawe abo emkhosini. Ukuza kuthi ga ngoku, uHomelander usebenzisa uninzi lweTrumpian, intetho ethandwayo malunga neengozi zabanqolobi abanamandla amakhulu, kunye nesidingo sokukhusela ilizwe laseMelika (ngegama lakhe.) U-Homelander usebenzisa uloyiko lwabangaphandle ukwandisa amandla akhe kunye nefuthe; ungumntu ogqwesileyo omhlophe.
I-Wertham kunye nabanye abagxeki bamaqhawe ngamanye amaxesha babonwa njengabachasene nohlobo-abaphikisi abafuna ukutshabalalisa uSuperman kunye nayo yonke intsapho yakhe. Kodwa aba batshabalalisi abagqwesileyo baphinde babonwe njengababhali be-superhero ngokwabo, bevelisa imibono emitsha kwezo nkolelo bazithandayo ukuzithiya nokuzonda ukuthanda. Inkqubo ye- Amakhwenkwe Ngokuqinisekileyo uphatha ama-superhero skeptics njengobutyebi. Ukubetha, ukuveza, kunye nokuthoba uSuperman, kwaye ubuya njenge-anti-Superman. Superman olungileyo uyadika emva kwethutyana. Ke Amakwenkwe yakha iSuperman engeyiyo endaweni yayo, kwaye emva koko yenza amabali ngokungachaneki kwayo.
Amanqaku okuQaphela yingxoxo eqhelekileyo yesiqhelo yeenkcukacha eziphambili kwinkcubeko yethu.
Amakwenkwe ubuyela kwiAmazon Prime kwisizini yesibini ngoSeptemba 4.
'URay Donovan' 3 × 9 Ukuphindaphinda: Ingwane
Impendulo kaDavid Beckham kuJacob Corden's Ugly Statue Prank Iyabulala
kwiindawo zokubeka online okuphumelela imali yokwenene
ice cream kunye neeresiphi zotywala
Ihlabathi lekhathuni yangomso
ii-Simpsons ziqikelela i-9 11
Loluphi uhlobo lweevenkile oluthembele kubukhulu bazo obukhulu kunye nokukhetha okunzulu ukuzama ukulawula imarike?
Ngaba i-rick kunye ne-morty yaphela